Posted: Caamsaa/May 26, 2017 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)
Lamaanuu Oromoo dha, lamaanuu Oromoof, lamaanuu Oromoon uumaman: Rakkoon jiru maali?
Akkuma beekamu fi namuu hubachuu danda’u yeroo ammaa mooraa QBO keessatti waan haaraa lamatu mul’atee jira. Isaan kunis Yaa’ii Hoggansa Oromoo – Oromo Leadership Convention (OLC) kan jedhamu fi Gumii Oromiyaa Addunyaa – Global Gumii Oromia (GGO) jedhamee kan dhiyoo kana ijaaramee dha. Isaan kana lamaanuu cimina sochii uummata Oromoo, keessumaayuu kan barattoota fi dargaggoota keenyaatu dhalche jechuu ni danda’ama. Sochiin uummata keenyaa, kan Oromiyaa keessatti akka ibiddaa boba’aa jiru diina keenyarratti qofaa otuu hin taane Oromoorrattillee dhiibbaa jabaa godhaa jira. Isa kanatu OLC fi GGOn akka dhalatan taasise jechuun dha. Dhiibbaa sochii kanaatu Sabboontotni Oromoo walittidhufanii akka dhimma saba keenyaatiif waliin mari’atani fi waliin hojjechuuf murteeffatan taasise. Isaan kun lamaanuu Oromoodhaan ijaaraman; Oromoof hojjechuuf uumamna; isaan lamaanuu Sabbontota keenyaan uumaman. Erga dhugaan kana ta’ee ammoo rakkoon jiru maaliree?
Alamu Semma Reply
Ilaalichaa kiyaa oromoo kessaattii wallii doorigommiinn hedduun baaribaachsaadha jeedhee amaanaa maalifii jeenaanii yoo akkaassii hin taanee gannaa 100 oli oromonot raafuu/ gabirromuu deemaa .kanaafuu waalii FB irraattii wallollloon baareedaa jedhee amaanaa !
OLC_hangafaa fi kan kutaa hawaasaa hunda keessattuu humna dargaggoo kan hammatee fi hegeree saba keenyaa mijeessuuf sirritti bu’uura cimaa kan kaa ‘e yoo ta’e,
GGO_kan jaarsolii hinaaffaan guutamaniin ijaarramee fi korrojaa malee bu’uura tokkollee kan hin qabneedha. Kaayyoon isaas Tokkummaa argamaa dhufe diiguuf ta’e jedhee kan dhaabbateedha. Karoorri isaaniis gabaabatti wixineen OLC irratti kaayaman kan bilisummaa saba keenyaa saffisiisuu dandahan akka hojirra hin oolle gufuu tahuudha.